ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: May 2008
Posted by ကိုပေါ on Saturday, May 24, 2008
Labels: Cartoon Comments: (4)
"Permit to mourn"
စင်္ကာပူနိုင်ငံ အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးပါတီတခုဖြစ်တဲ့ စင်္ကာပူဒီမိုကရက် ပါတီ အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ကျနော့်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ဆောင်းပါးလေးကို ကူးယူပြီး တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ဗမာလိုရေးထားတဲ့ “တညချမ်းဝယ်” နဲ့ အနည်းငယ် ကွဲပြားပါတယ်။ (အင်္ဂလိပ်လိုရေးသားရာမှာ ပါသွားတဲ့ အမှားမှန်သမျှကို စေတနာအပြည့်နဲ့ တကူးတက ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ ကျနော့်မိတ်ဆွေ မျိုးမြင့်မောင်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။)
Permit to mourn
THE TAXI, carrying the four of us, had just turned into St. Martin's Drive when the three plain-clothes police officers tried to flag it down. It was almost 6:50pm on Saturday, 17 May 2008.
"Don't stop," shouted by the four of us almost simultaneously. I was sitting in the front passenger’s seat while my wife Han Thu Lwin, Myo Myint Maung and another Burmese friend were in the back seat, all of us holding flowers in our hands.
To our dismay, the Singaporean taxi driver pulled the taxi over to the roadside gently.
"Whooi…a long way to go," I sighed. I then started to realize the extent of police dominance in Singapore and the level of obedience shown by the ordinary citizens here. Nowhere else in the world would you findataxi driver stopping at the flagging of non-uniformed police officers so easily against the wishes of the passengers in his taxi.
Showing his badge, one of the three policemen asked, "Are you residents here, sir?"
I was secretly amused by the question wondering howaperson like me wearing cheap shirts and takingacab, not drivingagood car, could inspire the police to think that I might live in such an affluent district. But, I simply replied, "No, we are not."
"Where are you going, sir?"
"To the Burmese embassy."
“Sorry, sir, you can't go there because the Myanmar (Burmese) embassy is already closed.”
I must admit that I was particularly proud to beaBurmese citizen at that moment because our embassy was extraordinarily effective in communicating with us, citizens of Burma, by keeping Singapore police to answer on its behalf about its opening hours at the entrance of St Martin's Drive.
Or perhaps it was just that the police underestimated my ability to think for myself. So, the sudden, mistaken pride that came to me out of thin air vanished immediately. Hey, do you think I amamoron? All Burmese in Singapore know that our embassy is normally closed on Saturdays.
"Don't worry, please. We are not going inside the embassy. We just want to go in front of the Burmese embassy to mourn for our people who died in the Cyclone Nargis. Anyway, thanks for your information."
“No, Sir. You can't go there. We advise you to leave this area immediately.”
Oops! Was it because the Cyclone Nargis was now passing through the St Martin's Drive, too? I was starting to worry about the safety of the residents living there.
But just in time, to quell my unwarranted anxiety, our old friend Mr Deep Singh from Tanglin Police Station came to the scene and chanted the very much familiar police mantra to our impatient ears.
“You can't assemble withoutapolice permit. You are advised to leave.”
“But....please wait, wait! There are only four persons on this taxi excluding the driver. How could this become an illegal assembly?”
He didn't answer our question. But he said, “As long as you have intention...”
"Oh, my god! Intention to do what? Our intention is just to mourn for our people who died because of the cyclone.”
Then he suggested that we should go to the temple to pray and mourn.
Please note that these were just advice and suggestions only; they didn't amount to warnings. So, why should we be advised and suggested repeatedly for so long without being allowed to get through? We appreciated his advice and suggestions, of course, because they were free. But, whether we took them or not was solely our own choice. To force us to accept his advice and hamper us from going in was too much for us. It was utterly outrageous.
Myo Myint Maung, who was sitting in the back seat, told the police officers that the only one piece of land in Singapore where we, Burmese, truly had the highest sense of belonging was our Burmese embassy.
At last, Mr Singh asked for our particulars, even though the three of us – my wife, Myo Myint Maung and myself – had given our particulars to his department onafew occasions in the past. At first, we argued for some minutes on why we needed to submit our particulars for just going to our embassy and mourning for our people.
Then, to our great astonishment, the extremely considerate Mr Singh said, "Please don't waste the time. The taxi driver will lose his valuable time to earn money. Please be considerate."
At first, I didn't believe my ears. During the whole conversation, the taxi meter was ticking and needless to say it was me who had to pay for the fare eventually. The driver was earning his fair income in the whole episode. Furthermore, I can swear that this delay was not caused by us. We were the one who wanted to arrive at our destination as soon as possible.
At last, as it seemed that the police was not going to allow us to go in without showing our particulars, we gave them to the police and proceeded to the embassy where we foundacouple who arrived just before us. But, they said that they didn't have to show their particulars. Why was the law applied selectively to us instead of being applied equally to all?
Later, I came to know that about 50 Burmese who also came to mourn at the embassy gradually started to gather at the entrance of St Martin's drive. At first, police were busy advising them to go back. When they refused and continued to hang around there, the police asked them for their particulars. As the crowd gradually grew to about 100 people, the police at last agreed to let us go in groups of four persons to the gate of the Burmese embassy to mourn there for five minutes each. However, it was not beforeaseries of negotiations as well as heated exchanges between the police and the three of us.
At the end, the police told us not to hold any hard feelings and apologized individually for the embarrassment caused earlier. Of course, we forgave them because we understood their position. They were police officers just carrying out their duties. They too are human beings with kind hearts; we believe that. But, we still hope the law will be applied equally to all races, nationalities, and religions, not selectively. Moreover, it should be applied fairly and correctly.
We wish Singaporeamore vibrant society with more freedom and openness where every resident has the right to life, liberty and pursuit of happiness.
Posted by ကိုပေါ on Thursday, May 22, 2008
Posted by ကိုပေါ on Wednesday, May 21, 2008
Labels: Cartoon Comments: (3)
မေလ ၁၇ ရက်။ စနေနေ့ညနေ။
ကျနော်တို့ လေးယောက် စီးနင်းလိုက်ပါလာသော တက္ကစီကား စိန့်မာတင်ဒရိုက်ဗ်လမ်းထဲကို ချိုးဝင်လိုက်တော့ ညနေ ၇ နာရီထိုးဘို့ ဆယ်မိနစ်ခန့်ဘဲ လိုတော့တယ်။ ကားဝင်လာတာမြင်တော့ အရပ်ဝတ်နဲ့ ရဲသုံးယောက်က လမ်းထိပ်ကနေ လက်ပြပြီး လှမ်းတားတယ်။
ကျနော်တို့ လေးယောက်စလုံး တပြိုင်တည်းလိုလို အော်လိုက်ကြတယ်။ ကျနော်က ရှေ့ခန်းမှာ ထိုင်လျက်။ မဒမ်ပေါ၊ မျိုးမြင့်မောင်နဲ့ အခြား မြန်မာတယောက်က တက္ကစီနောက်ထိုင်ခုံမှာ။ ကျနော်တို့အားလုံးလက်ထဲမှာ ပန်းတွေ ကိုယ်စီကိုင်ထားကြတယ်။
ဒါပေမယ့် တက္ကစီသမားက ကားကို လမ်းဘေးကို ဆွဲချပြီး ညင်ညင်သာသာ ထိုးရပ်ပေးလိုက်တော့ ကျနော်တို့ တော်တော် စိတ်ပိန်သွားတယ်။
“အင်း.....ဒီပုံနဲ့တော့ ကျော်လွှားရမယ့်အရာတွေက များသေးတယ်” လို့ တွေးရင်း ကျနော်သက်ပြင်းတချက်ကို ပင့်ရှိုက်လိုက်မိတယ်။ တချိန်တည်းမှာဘဲ စင်္ကာပူမှာ ရဲတွေ ဘယ်လောက်အထိ ကြီးစိုးလွှမ်းမိုးနေတယ်၊ သာမန်အရပ်သားတွေအနေနဲ့ ဘယ်လောက်အထိ ဦးကျိုးနေတယ်ဆိုတာကိုပါ သိသိသာသာကြီး ခံစားလိုက်မိတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်က တခြားဘယ်နိုင်ငံမှာမဆို ခရီးသည်တင်ဆောင်လာတဲ့ တက္ကစီကို အရပ်ဝတ်ရဲက လှမ်းတားရင် ခရီးသည်ဆန္ဒနဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီး ဘယ်တက္ကစီသမားမှ လွယ်လွယ်ကူကူ ရပ်လိမ့်မယ် မဟုတ်။ ဒါပေမယ့် ဒါက စင်္ကာပူလေ။
ရဲသုံးယောက်အနက် တယောက်က သူ့ ရဲတံဆိပ်ကဒ်ပြားကို ပြရင်း.....“ခင်ဗျားတို့က ဒီ လမ်းထဲမှာ နေတဲ့လူတွေလား” တဲ့။ ကြည့်ဦး....မေးပုံက။ လူဆိုး။
ကျနော် ကျိတ်ပြီး ရီချင်သွားတယ်။ ကြံကြံဖန်ဖန်ကွယ်။ အပေါစား စပို့ရှပ်ကလေးဝတ်ပြီး အငှားကားစီးဝင်လာတဲ့သူကိုမှ ဒီလူချမ်းသာရပ်ကွက်မှာ နေတဲ့လူလားလို့ မေးရက်ပလေတယ်။ ဒါပေမယ့် ပါးစပ်ကတော့ “မဟုတ်ပါဘူး” လို့ဘဲ ခပ်တိုတို ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။
ရဲ။..........။ “ဒါဆို ဘယ်သွားမလို့လဲ ခင်ဗျ”
ရဲ။...........။ “၀မ်းနည်းပါတယ်ဗျာ။ မြန်မာသံရုံးကို ဒီအချိန်ပိတ်ပါတယ်။ သွားလို့မရပါဘူး။”
အဲဒီတဒင်္ဂမှာတော့ ကျနော်ဟာ မြန်မာလူမျိုးဖြစ်ရတာကို အတော်လေးဂုဏ်ယူသွားမိတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ။ မြန်မာသံရုံးဟာ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို အရေးတယူနဲ့ သံရုံးဖွင့်ချိန်ပိတ်ချိန်ကို စင်္ကာပူရဲကတဆင့် ပါးစပ်ငှားပြီး ထိရောက်စွာအကြောင်းကြား ပေးနေနိုင်တာကိုး။ ဟာ...နေဦး။ မဟုတ်သေးဘူး။ ဧကန္တ၊ အရပ်ဝတ်နဲ့ ဒီငနဲသားက ငါ့ရဲ့ စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းကို လျှော့တွက်တာဘဲဖြစ်ရမယ်။ ဟင်းဟင်း လူကိုများ ငတုံး အောက်မေ့နေလားမသိဘူး။ ဟေ့...ဒီမယ် မြန်မာသံရုံးဆိုတာ စနေနေ့ ဘယ်တော့မှ မဖွင့်ဘူးဆိုတာ မြန်မာတိုင်းသိတယ်ကွယ့်။ ဘာမှတ်နေလဲ...ဟင်း...ဟင်း။ (စိတ်ထဲမှာ ပြောလိုက်တာပါ။) ပါးစပ်ကတော့.....
“မပူပါနဲ့ဗျာ။ ကျုပ်တို့ကလည်း သံရုံးထဲ ၀င်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်း တိုက်ခတ်လို့ သေဆုံးသွားတဲ့ ကျုပ်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက် သံရုံးရှေ့မှာဘဲ ခဏတဖြုတ် ပူဆွေးဝမ်းနည်းမလို့ပါ”
ရဲ။.............။ “အဲဒီကို သွားလို့မရပါဘူးခင်ဗျာ။ ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ ဒီနေရာကနေ အမြန်ဆုံး ထွက်ခွာသွားဘို့ အကြံပေးလိုပါတယ်။”
ဗုဒ္ဓေါ..... သွားလို့မရဘူးဆိုပါလား။ ဘုရား... ဘုရား... စိန့်မာတင်ဒရိုက်လမ်းထဲမှာပါ နာဂစ်မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်သွားလေရော့သလားမသိ။ သွားပြီ... ငါတို့ ချွေးနှဲစာထဲကနေ ခြစ်ခြုတ်ပြီး သံရုံးမှာ ပေးဆောင်ချင်လွန်းလို့ ရှိခိုးဦးတင် အောက်ကျို့ပြီး လျှောက်လွှာရေး၊ ကြည်ဖြူစွာ ပေးဆောင်ထားတဲ့ အခွန်တွေတော့ လေပြင်းထဲမှာ ပေါက်မိတဲ့ အီးတလုံး လို သဲလွန်စမကျန်ဘဲ ပျောက်ဆုံးသွားရော့မယ်လို့... ကျနော် ရုတ်ချည်းပူပန်သွားတယ်။
အဲ..အဲ တော်ပေသေးရဲ့။ ကျနော့်ရဲ့ အစိုးရိမ်လွန်မှုကို ချေဖျက်ပေးမယ့် တန်လင်းရဲဌာနချုပ်မှ မိတ်ဆွေဟောင်းကြီး ဆစ်ခ်လူမျိုး ထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲ မစ္စတာ ဒိဆင်း မြင်ကွင်းထဲကို အချိန်မီ ၀င်ရောက် လာတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း အကြိမ်တရာမက ကြားဘူးနေကျ စကားရပ်တွေ သူ့ပါးစပ်က တတွတ်တွတ် ထွက်ကျလာတယ်။ အမယ်မင်း... နားဆင်းရဲလိုက် တာကွယ်။
ဒိဆင်း။.............။ “ရဲပါမစ်မပါဘဲ တရားမ၀င် လူစုလူဝေးလုပ်လို့မရဘူး။ ခင်ဗျားတို့ ဒီနေရာက အမြန်ဆုံးထွက်ခွာသွားဘို့ အကြံပေးချင်တယ်။”
ကျနော်။............။ “နေပါဦးဗျာ။ ဒီတက္ကစီထဲမှာ ကားဆရာကို ဖယ်လိုက်ရင် လူလေးယောက်ဘဲကျန်တော့တာ။ ဘယ်လိုလုပ် တရားမ၀င် လူစုလူဝေးလို့ သတ်မှတ်ရသလဲ။ (သူ့နိုင်ငံဥပဒေအရက လူငါးယောက်ထက် ပိုမစုရလေ။)”
ဆရာသမားက ကျနော့်အမေးကို မဖြေဘူး။ ဘာပြောလဲဆိုတော့...“ခင်ဗျားတို့မှာ ရည်ရွယ်ချက်တစုံတရာနဲ့ စုဝေးတာဖြစ်နေသရွေ့.....”
“ဘုရားရေ။ ဘာရည်ရွယ်ချက်ကို ပြောနေတာလဲ။ ကျုပ်တို့ ရည်ရွယ်ချက်က မုန်တိုင်းဘေးကြောင့် သေဆုံးသွားတဲ့ ကျုပ်တို့ နိုင်ငံသားတွေအတွက် ၀မ်းနည်းကြေကွဲ ဆုတောင်းဘို့ ဟာဘဲ..ကို”
အဲဒီမှာ ဉာဏ်ကြီးရှင်က ကျနော်တို့ကို အခုလို အကြံပေးသဗျ။ ဆုတောင်းဘို့ဆိုရင် ဘုန်းကြီးကျောင်းကို သွားပြီး ဆုတောင်းပါတဲ့။ ဒီနေရာက ဆုတောင်းတဲ့နေရာ မဟုတ်ဘူးတဲ့။
ဒီနေရာမှာ သတိပြုရမှာက အခုအချိန်အထိ သူပြောသမျှဟာ အကြံပေးတာ၊ အကြံပြုတာတွေချည်းဘဲ။ ရဲက ပြင်းထန်စွာ သတိပေးတယ် ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ ဒီတော့ကာ အကြံပေးတာဘဲ... ဘာကြောင့် ဒီလောက် အကြာကြီး အချိန်ဆွဲပြီး ထပ်ကာထပ်ကာ ပေးနေရသလဲ။ ကျနော်တို့ကို ဘာကြောင့် သွားခွင့်မပြုသေးသလဲ။ သူ့အကြံပေးချက်တွေ အတွက်တော့ ကျနော်တို့ အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။ အလကားရတဲ့ အကြံပေးချက်တွေ မဟုတ်လား။ ဒါပေမယ့် အကြံပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ အတင်းလက်ခံခိုင်းနေ၊ ကျနော်တို့ကို တားဆီးနေတာကတော့ လက်ခံနိုင်ဘွယ်ရာ အလျဉ်းမရှိဘူး။ တမင်သက်သက် ဗိုလ်ကျနေတာဘဲ။
နောက်ခန်းမှာ ထိုင်လိုက်လာတဲ့ မျိုးမြင့်မောင်က ၀င်ပြောတယ်။ စင်္ကာပူမှာ မြန်မာလူမျိုးတွေ အနေနဲ့ ကိုယ့်မြေကိုယ့်ရေ၊ ကိုယ့်နိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုခံစားနိုင်တဲ့ (one piece of land where we have the highest sense of belonging) နေရာက တခုဘဲ ရှိတယ်။ အဲဒါဟာ မြန်မာသံရုံးဘဲတဲ့။ အမှန်ကတော့ သဘောကို ပြောပြတာပါ။ တကယ်ကတော့ မြန်မာသံရုံး ဆို ကြောက်လွန်းလို့။ တခေါက်တခေါက် ပတ်သက်ရတိုင်း အိတ်ထဲက ပိုက်ဆံထွက်လွန် လွန်းလို့ပါ...အရပ်ကတို့ရေ။
နောက်ဆုံးတော့ မစ္စတာဆင်းဟာ ထုံးစံအတိုင်း ကျနော်တို့ရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် တွေကို တောင်းပါတော့တယ်။ အမှန်တော့ ကျနော်၊ မဒမ်ပေါနဲ့ မျိုးမြင့်မောင်ရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကို အရင့်အရင်က နှစ်ကြိမ်မက သူတို့ကို ပေးခဲ့ပြီးသား။ ဒါကို သက်သက်မဲ့ ညစ်တွန်းတွန်းပြီး ထပ်တောင်းနေတာ။ ကျနော်တို့က ဘာဖြစ်လို့ ထပ်ပေးရမှာလဲဆိုပြီး အဲသည်မှာ အချိန်တော်တော်ကြာကြာ အချေအတင်ပြောရသေးတယ်။
ပြီးတော့ ရုတ်တရက်ဆိုသလို ကိုယ်ချင်းစာတရားကြီးမားလေသူ မစ္စတာဆင်းက ဟောဒီ မှတ်သားလောက်ဘွယ်စကားကို မိန့်မြွက်ပါတယ်။
“အလကား အချိန်မဖြုန်းပါနဲ့ကွာ။ မင်းတို့လုပ်တာနဲ့ တက္ကစီသမားမှာလည်း ငွေရှာဘို့အချိန်တွေ အလဟဿ ပြုန်တီးကုန်ပြီ” တဲ့။
သေဟဲ့ နန္ဒိယ။ နားရှိလို့သာ ကြားလိုက်ရတယ်။ ကိုယ့်နားကိုယ်တောင် မယုံနိုင်။ ဘယ့်နှယ့်ဗျာ၊ ကျနော်တို့ စကားပြောနေစဉ်တလျှောက်လုံး တက္ကစီမီတာက စင်္ကာပူက ကုန်ဈေးနှုန်းလိုဘဲ တရိပ်ရိပ် ထိုးတက်နေတာခင်ဗျ။ အခုလို စောင့်ဆိုင်းရတဲ့အတွက် သူရသင့် ရထိုက်တဲ့ အခကြေးငွေကို မီတာတက်သလောက် တက္ကစီသမားမုချရမှာဘဲ။ တကယ်တမ်း အဲဒီငွေကို စိုက်ထုတ်ပေးရမှာကတော့ ကျနော့်အိတ်ကပ်ထဲက။ ကိုယ့်လူ....သနားတာ လူမှားနေပြီ။ နောက်ပြီး ကျနော် ကျိန်ပြောဝံ့တာတခုက အခုလို ကြန့်ကြာနေရတာ ကျနော်တို့ကြောင့်မဟုတ်။ တကယ်ဆို ကျနော်တို့က ခရီးသည်ဘဲ။ ကိုယ်သွားချင်တဲ့နေရာ အမြန်ဆုံးရောက်ချင်တာပေါ့၊ မဟုတ်ဘူးလား။
ကျနော်တို့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေ မပေးရင် လုံးလုံး ပေးဝင်မယ့်ပုံမပေါ်တာနဲ့ နောက်ဆုံးတော့ သူတို့ကို အိုင်စီကဒ်ပြပြီး မြန်မာသံရုံးရှေ့ကို ရောက်ခဲ့ရပါတော့တယ်။ အဲသည်မှာ ကျနော်တို့အရင် ရောက်နေတဲ့ မြန်မာလင်မယားစုံတွဲတတွဲကို သွားတွေ့တယ်။ သူတို့အနေနဲ့တော့ အိုင်စီကဒ် ပြစရာမလိုဘူးတဲ့။ ဘာကြောင့် ဥပဒေကို တပြေးညီတည်း သတ်မှတ်မကျင့်သုံးသလဲတော့ စဉ်းစားစရာဘဲ။ (အေးလေ...ငါတို့ကို ရဲက ပိုချစ်လို့ဘဲ ဖြစ်မှာပါဆိုပြီး စိတ်ဖြေလိုက်ပါတယ်။)
နောက်တော့ ကျနော်တို့လိုဘဲ လာရောက်ဆုတောင်းမယ့် မြန်မာလူမျိုးငါးဆယ်ခန့် လမ်းထိပ်မှာ စတင်စုဝေးလာတာကို တွေ့ရတယ်။ ပထမတော့ ရဲတွေက လူစုခွဲပြန်ကြဘို့ တဦးချင်းလိုက်လံ စည်းရုံးရင်း ဗျာများနေတာကို တွေ့ရတယ်။ သူတို့စကားနဲ့ဆိုရင် ဒီနေရာကနေ အမြန်ဆုံး ထွက်ခွာသွားဘို့ အကြံပေးတယ်ပေါ့ဗျာ။ အဲဒါကို မြန်မာတွေက မပြန်ဘဲ ပေကပ်ပြီး စုဝေးနေကြတော့ နောက်တဆင့်တက်ပြီး အိုင်စီကဒ်တွေ ထုတ်ပြခိုင်းတဲ့ နည်းကို သုံးတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လူအုပ်က ဆက်လက်ကြီးထွားလာပြီး လူတရာလောက် အင်အားရှိလာတဲ့အခါ နောက်ဆုံးမတော့ ရဲက လူတွေကို လေးယောက်တတွဲနဲ့ သံရုံးရှေ့မှာ ဆုတောင်းခွင့်ပေးလိုက်ရတော့တယ်။
တသုတ်ကို ငါးမိနစ်နှုန်းနဲ့ သံရုံးတခါးဝနားမှာ ပန်းတွေချ၊ ဖယောင်းတိုင်တွေထွန်းပြီး ၀မ်းနည်းကြေကွဲစွာ ဆုတောင်းကြတယ်။ အမျှဝေကြတယ်။ ဆုတောင်းကြတဲ့အထဲမှာ နအဖ ကြီး အမြန်ဆုံးပြုတ်ကျပါစေ ဆိုတာလည်း ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေအားလုံးဟာ ရဲနဲ့ အကြိမ်ကြိမ် အထပ်ထပ် ဆွေးနွေးငြင်းခုန်ပြီးမှ ရလာတဲ့ အခွင့်အရေးပါ။
နောက်ဆုံးအချိန်ကျတော့ ရဲက ကျနော်တို့ကို လာပြောပါတယ်။ စောစောက စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေခဲ့တဲ့အတွက် အာဃာတ မထားဘို့၊ သူတို့တဦးချင်းအနေနဲ့ တောင်းပန်ကြောင်းပြောပါတယ်။ ကျနော်တို့ကလည်း ခွင့်လွှတ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ သူတို့ကို ပေးအပ်လာတဲ့ တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ခြင်းမျှသာဖြစ်ကြောင်း ကျနော်တို့ ကောင်းကောင်း သဘောပေါက်ပါတယ်။ သူတို့လည်း လူသားတွေပီပီ ကြင်နာတတ်တဲ့ နှလုံးသားတွေ ရှိမယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့ အသေအချာ ယုံကြည်ပြီးသားပါ။
ဒါပေမယ့် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးအပြီးမှာ မြန်မာ့အရေးအတွက် အနောက်တိုင်းသူတွေ ပါမစ်မပါဘဲ စုဝေးခဲ့တုန်းက စင်္ကာပူရဲက နှုတ်ဆိတ်နေခဲ့ပါတယ်။ ဥပဒေကို ကျင့်သုံးတဲ့နေ ရာမှာ လူမျိုးမရွေး၊ ဘာသာမရွေး၊ နိုင်ငံသားမရွေး အားလုံးကို တန်းတူညီမျှ ကျင့်သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစုတဖွဲ့ကို ရွေးချယ်ပစ်မှတ်ထားပြီး အပြစ်မရှာသင့်ပါဘူး။ နောက်ပြီးတော့ ဥပဒေကို တရားမျှတစွာ မှန်ကန်စွာ လက်တွေ့ကျင့်သုံးတာမျိုးလည်း ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့ တချို့သော ဥပဒေတွေဟာ တရားမျှတမှုလုံးလုံးမရှိဘဲ၊ လူထုကို ဖိနှိပ်ဖို့သက်သက် အုပ်ချုပ်သူများက ရေးဆွဲထားတဲ့ ဥပဒေတွေ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အဲသည်လို ချုပ်ချယ်တဲ့ ဥပဒေနှင့် တွေ့ကြုံလာရင် မိမိတို့ လူ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်း၊ လူ့သိက္ခာကို ဦးစားပေး၊ တန်ဘိုးထားပြီး မတရားတဲ့ ဥပဒေများကို ချိုးဖောက်တန်သင့်ရင် ချိုးဖောက်ရပါမယ်။ ရိုစာပါ့ခ်၊ မာတင်လူသာကင်း၊ မဟတ္တမဂန္ဒီ နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်စတဲ့ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများဟာ မတရားတဲ့ ဥပဒေမှန်သမျှကို သတ္တိရှိရှိနဲ့ ဖီဆန်ခဲ့ကြပါ တယ်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာလည်း ယခုထက် ပိုမိုခေတ်မီပွင့်လင်းပြီး နိုင်ငံအတွင်း မှီတင်း နေထိုင်သူတဦးချင်းရဲ့ အသက်ရှင်ပိုင်ခွင့်၊ လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးပိုင်ခွင့်တို့ကို ပိုမိုအလေးထားတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတရပ် ပေါ်ပေါက်လာစေကြောင်း ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။
“ဘယ်သူသေသေ ငရွှေ မာရင်ပြီးရော”
ဒီနေ့အဖို့ အိမ်ကမထွက်ခင် ကာတွန်းလေးတပုံ ဆွဲပြီး တင်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေ မြန်မာပြည်တွင်းကို အလျှင်အမြန် ပေးမ၀င်ရကောင်းလားဆိုပြီး အားမလိုအားမရဖြစ်နေသူများအတွက် အများအချစ်တော် “နအဖ”က ပြန်လှန်မေးခွန်းတခု ထုတ်လိုက်ကြောင်း သိရပါတယ်။ အဲဒီမေးခွန်းကတော့....
“လူသားချင်း စာနာတယ် ဆိုတာ ဘာလဲဟင်...၊ တို့များ နားလည်ဝူး....” တဲ့။
Posted by ကိုပေါ on Saturday, May 17, 2008
Labels: Cartoon Comments: (2)
“ဖြူစင်သောအလှုငွေ၊ မွန်မြတ်သောစိတ်ထားနှင့် နာရေးကူညီမှုအသင်းကြီး”
ရေးသူ------------------> ဂျေမိုး၊ မေလ ၁၆ရက် ၂၀၀၈။
စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ လမ်းပြကြယ်စာကြည့်တိုက်မှ မြန်မာလေဘေးဒုက္ခသည်များအတွက် အလှုငွေ ၄၁၅ သိန်းနှင့် ကုန်ပစ္စည်း ၆တန်ကို နာရေးကူညီမှုအသင်းကြီး မှတဆင့်လှုဒါန်းခဲ့ပြီး ကုန်ကစ္စည်းလက်ကျန် (၇) တန်ကို လေယာဉ်ခရီးစဉ်ဖြင့် ဆက်လက်ပို့ဆောင်မည်ဟု သိရသည်။
ပြည်ပရောက် မျိုးချစ်မြန်မာများ အဖွဲ့မှလည်း ယနေ့ထိ ကောက်ခံရရှိငွေ ဒေါ်လာ တစ်သိန်းနှစ်သောင်းကျော် လက်ခံရရှိပြီး ခြောင်သောင်းကျော်ကို မြန်မာပြည်ရှိ လေဘေးဒုက္ခသည်များအား လှုဒါန်းပြီးဖြစ်သည်။ နာရေးကူညီမှုအသင်းကြီးတွင်လည်း ဒေါ်လာတစ်သောင်းကျော်တန်ဘိုးရှိ ဆန်အိတ် ငါးရာ လှုဒါန်းခဲ့သည်။ အလှုငွေကောက်ခံသောလုပ်ငန်းကို လာမည့် မေလ(၁၉)ရက်နေ့အထိ နောက်ဆုံးထားကောက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး ကျန်ရှိနေသော အလှုငွေများကို ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များ အလွယ်တကူ မဝင်ရောက်နိုင်သော လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲသော နေရာများကို ရွေးချယ်လှုဒါန်းသွားမည်ဟု မျိုးချစ်မြန်မာအဖွဲ့ လူငယ်တစ်ဦး၏ အဆိုအရ သိရသည်။
လမ်းပြကြယ်စာကြည့်တိုက်နှင့်ပတ်သက်၍ "နောက်ထပ် ကုန်ချိန်(၇)တန်လောက်ရှိဦးမယ် အခုငှားထားတဲ့ သိုလှောင်ရုံက အရမ်းပြည့်နေတယ် အဲဒါတွေကို အရင်ရှင်းလိုက်မယ် အဝတ်အစားအလှုခံတာတွေကိုတော့ ခဏရပ်ထားမယ် လက်ထဲမှာရှိနေသေးတဲ့ (၇)တန်ကို အရင်မြန်မာပြည်ကိုပို့ပြီးရင် လမ်းပြကြယ်ကနေ ပစ္စည်းတွေပြန်လက်ခံပါပြီဆိုတာကို ကြေညာမယ် အဲဒီအချိန်ဆိုရင် လာပို့လို့ရပြီ" နာရေးအသင်းကြီး ဆက်လက် အကူအညီပေးသွားနိုင်ဖို့ အလှုငွေတော့ လမ်းပြကြယ်အနေနဲ့ ဆက်လက်လက်ခံပေးဦးမယ်"
"လမ်းပြကြယ်မှာ အခုအမြဲတမ်းပါဝင်ကူညီနေသူတွေ လူဦးရေ ၂၅ ယောက်လောက်ရှိတယ် အလုပ်လုပ်နေသူရော ကျောင်းသားတွေရောပါတယ်" "လော်ရီကားတွေကလဲ လေး၊ ငါး၊ ခြောက်စီးလောက်ရှိတယ် ကားတွေကတော့ ဖုန်းနံပါတ်တွေပေးထားတယ် အကူအညီလိုတဲ့အချိန်မှာ ဖုန်းဆက်လိုက်ရင်လာပြီး ကူညီတာပဲ"
"ကိုယ့်ချွေးနဲစာထဲကနေလာလှုကြတဲ့သူတွေရဲ့ စေတနာကို အရမ်းလေးစားပါတယ် နာရေးကူညီမှု အသင်းကြီးကလဲ တစ်ဘက်မှာ အပင်ပမ်းခံပြီးလုပ်ပေးနေတယ်ဗျာ နောက်တစ်ခုက အစ္စရေးနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ မြန်မာ လူဦးရေ ခုနှစ်ရာလောက်ကနေ နာရေးကူညီမှုအသင်းကြီးကို သိန်းငါးဆယ်လှုပေးပါဆိုလို့ လူပေးလိုက်သေးတယ်" ပုံမှန်အားဖြင့် လမ်းပြကြယ်စာကြည့်တိုက်အနေနဲ့ တနေ့ကောက်ခံရရှိတဲ့ငွေကို တနေ့ချင်းလွှဲပြောင်းပေးတဲ့အခါကျတော့ နာရေးအသင်းကြီးအနေနဲ့ စီမံခန့်ခွဲရတာလွယ်ကူသလို အလှုရှင်တွေကိုယ်၌ကလည်း ကိုယ်လှုလိုက်တဲ့ ပိုက်ဆံ ဒုက္ခသည်တွေဆီကို ချက်ချင်းရောက်သွားတယ်ဆိုတာ ချက်ချင်းသိနိုင်တယ်လေ" ဟု လမ်းပြကြယ်မှ ကိုစိုင်း ကပြောပြပါသည်။
ပင်နီဇူလပလာဇာရှိ တာဝန်ရှိသူများမှလည်း အလှုခံပစ္စည်းများ သိမ်းစည်းနိုင်ရန် လမ်းပြကြယ် စာကြည့်တိုက်အတွက် အသင့်အတင့် ကျယ်ဝန်းသည့် အခန်းတစ်ခန်း စီစဉ်ပေးထားကြောင်းသိရသည်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ မြန်မာ့အရေးတက်ကြွသူများမှ နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် သေဆုံးသွားသူများနှင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုများအား ရည်စူး၍ စင်္ကာပူနိုင်ငံသံရုံးရှေ့တွင် စနေနေ့ညနေ (၇)နာရီမှစတင်ပြီး ဖရောင်းတိုင်များထွန်းညှိကာ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သကြမည်ဟု သိရသည်။
လူသားချင်း စာနာထောက်ထားပြီး ကြားဝင် ဆောင်ရွက်မှုများ အမြန်ဆုံး ဆောင်ရွက်ပေးရန် စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ မြန်မာနှစ်ထောင်ခန့်မှ လက်မှတ်များရေးထိုးပြီး အမေရိကန်၊ဗြိတိန်နှင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးများသို့ ပေးအပ်ပြီးဖြစ်သည်။ ၄င်းလက်မှတ်များကို ကုလသမဂ္ဂ နှင့် တခြားနိုင်ငံများသို့လည်း အလားတူ ပေးပို့ပြီးကြောင်းသိရှိရပါသည်။
ရေးသူ----------->ဂျေမိုး၊ မေလ ၁၆ရက် ၂၀၀၈။
Posted by ကိုပေါ on Friday, May 16, 2008
“မေလ ၁၇ ရက် - စင်္ကာပူနိုင်ငံ မြန်မာသံရုံးရှေ့ ဖယောင်းတိုင်ထွန်းညှိ ဆုတောင်းမည် ”
လာမယ့် မေလ ၁၇ ရက်နေ့ (စနေနေ့) ညနေ ၇ နာရီမှ စတင်ကာ စင်္ကာပူနိုင်ငံ စိန့်မာတင်ဒရိုက်လမ်းရှိ မြန်မာသံရုံးရှေ့၌ စင်္ကာပူရောက် မြန်မာများအနေဖြင့် နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် သေဆုံးသွားကြသော မြန်မာလူမျိုး တသိန်းကျော်အတွက် ၀မ်းနည်းကြေကွဲသည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် စုဝေးကြကာ ဖယောင်းတိုင်များ ကိုယ်စီ ထွန်းညှိ၍ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆုတောင်းကြမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြားသိရသည်။ (ပေတရာ)
မိုးမခ အင်တာနက်စာမျက်နှာမှ ကူးယူဖော်ပြသည်။ (ဒီမှာ ဖတ်ပါ၊)
Labels: sharing Comments: (1)
“၂၁ ရာစု ခေတ်ကြီးထဲမှာ….မယုံနိုင်ဘွယ်”
သင့်စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လို ခံစားရပါသလဲ။
…………..စတဲ့ အရိပ်အယောင်တွေကို ဟောဒီ ဘိုကလေးမြို့နယ်က ဒုက္ခသည် ကလေးငယ်ရဲ့ မျက်နှာမှာ အထင်းသားပေါ်နေတယ်လို့ မခံစားရဘူးလား။
ကြီးလာရင် ဆရာဝန်ကြီးလုပ်မယ်၊ အင်ဂျင်နီယာကြီး ဖြစ်ချင်တယ်၊ ကျောင်းဆရာဖြစ်ချင်တယ် စတဲ့ အိပ်မက်မျိုးတွေ အဲဒီကလေးငယ်ခမြာ လောလောဆယ် မက်မြင်နိုင်ဦးမယ်မဟုတ်ဘူး။ နောက်နာရီအနည်းငယ်အတွင်းမှာ၊ ဒါမှမဟုတ် လာမယ့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ အစာရေစာ ၀လင်စွာနဲ့ နွေးထွေးလုံခြုံတဲ့ ခိုလှုံစရာနေရာတခုမှာ အသက်ရှင်သန် နေပါရစေ…ဆိုတာသာ သူ့အတွက် လောလောဆယ် အမြင့်မားဆုံး မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်ပေမယ်။
ကမ္ဘာ့တဘက်ခြမ်းကို တရက်အတွင်း ခရီးပေါက်နိုင်တဲ့ သည် ၂၁ ရာစု ခေတ်ကြီးထဲမှာ သည်ကလေးလိုအပ်နေတဲ့ အကူအညီတွေကို ရက်ပေါင်း ၁၂ ရက် ကြာလာတဲ့အထိ အရောက်ပို့မပေးနိုင်တာဟာ လူအဖွဲ့အစည်းတရပ်လုံးအနေနဲ့ အင်မတန် ရှက်သင့်တဲ့ ရှုံးနိမ့်မှုတခုပါဘဲ။
Posted by ကိုပေါ on Thursday, May 15, 2008
“မေလ ၁၇ ရက် သို့မဟုတ် ဆိုင်ကလုန်းအကူအညီအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုနေ့...”
နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဘေးဒဏ်အတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှ ပေးလာသော အကူအညီများမှာ ယခုအခါ စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ သန်း ၈၀ ခန့် ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ အလှူစာရင်းအသေးစိတ်ကို ဧရာဝတီ အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်း အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် သွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ (ဒီမှာ ကလစ်ခေါက်ပါ။)
ပြည်ပတွင် ရောက်ရှိနေသော မြန်မာတို့၏ ငွေကြေးအလှူ၊ အ၀တ်အစား အသုံးအဆောင်နှင့် လုပ်အားဒါနအလှူတို့မှာလည်း ကြက်သီးထခမန်းပင်ဖြစ်သော်လည်း နိုင်ငံတကာမှ ကူညီမည့် ပမာဏနှင့်မူကား နှိုင်းယှဉ်ရန် မဖြစ်နိုင်ချေ။ ထို့ပြင် မြန်မာတို့အနေဖြင့် တသီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ကာ အကူအညီပေးသည့် စေတနာရှင် လုပ်အားပေးသူများ အမြောက်အမြား ရှိသည်ကားမှန်၏။ တကယ်တမ်းတွင်မူ လက်တွေ့ကယ်ဆယ်ရေးအပိုင်း၌ စနစ်တကျ လေ့ကျင့်ပေးထားသည့် အတွေ့အကြုံရှိသော နိုင်ငံတကာမှ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များနှင့်ကား မယှဉ်သာပေ။ လိုအပ်သော မော်တော်ယာဉ်၊ စက်ပစ္စည်းကိရိယာ၊ တန်ဆာပလာ၊ အထောက်အကူပစ္စည်းများမှာလည်း နိုင်ငံတကာမှ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များသာလျှင် တတ်နိုင်ပေသည်။
သို့သော် ယခုကြုံတွေ့နေရသော အဓိက ပြဿနာမှာ ထိုအကူအညီအထောက်အပံ့အားလုံး လိုအပ်နေသူများထံ လက်ငင်း အချိန်မဆိုင်းရောက်ရှိဘို့အရေးပင်ဖြစ်သည်။
အားလုံးသိပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်း မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် ၄င်းတို့၏ လက်ကိုင်ဒုတ်ဖြစ်သော ကြံဖွံ့၊ စွမ်းအားရှင်၊ မယက၊ ရယက စသည့် အဖွဲ့အစည်း အရပ်ရပ်သည် ကမ္ဘာတလွှားမှ ကူညီထောက်ပံ့မှုများကို ဒုက္ခသည်များလက်သို့ မရောက်အောင် နည်းမျိုးစုံဖြင့် ဟန့်တား နှောက်ယှက်လျက်ရှိသည်။
အထက်က ဆိုခဲ့သော နိုင်ငံတကာ အကူအညီများနှင့် ကယ်တင်ရေးအဖွဲ့များအနေဖြင့် လိုအပ်နေသူများထံ အချိန်မီ မရောက်နိုင်ပါက အင်မတန် ဆိုးဝါးသော အခြေအနေတရပ်ကို မလွဲမသွေ ကြုံတွေ့ရပေတော့မည်။ ကုလသမဂ္ဂ၏ ခန့်မှန်းချက်အရ.... အချိန်မီအကူအညီ မပေးနိုင်သည့်အတွက် နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်လာသော ရောဂါဘယတို့ကြောင့် အသက် ဆုံးရှုံးရမှုမှာ မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် သေကြေပျက်စီးသော အရေအတွက်ထက်ပင် အဆပေါင်းများစွာ ပိုနိုင်သည် ဆို၏။ ယခုပင်လျှင် ကုလသမဂ္ဂခန့်မှန်းချက်အရဆိုလျှင် ယနေ့အထိ သေဆုံးသူပေါင်း နှစ်သိန်းတစ်သောင်းကျော်ခဲ့ပြီ ဆို၏။
ထို့ကြောင့်နိုင်ငံတကာမှ အကူအညီ ချက်ချင်းအချိန်မဆိုင်း ၀င်ရောက်နိုင်ဘို့ရာ အင်မတန် အရေးကြီးသည်။ ကျနော်တို့သည် ဖြစ်လာသမျှအား ဘာမျှမတတ်နိုင်သကဲ့သို့ စိတ်ပျက်လက် ပျက် ထိုင်ကြည့်နေမည့်အစား ကျနော်တို့တတ်နိုင်သည့်ဘက်က နည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့် နိုင်ငံတကာမှ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များ အမြန်ဆုံး ၀င်ရောက်ရန် ကိစ္စကို တိုက်တွန်းတောင်းဆိုသွားရမည်ဖြစ်သည်။
ယူအက်စ်ကမ်ပိန်းဖော်ဘားမား မှ မေလ ၁၇ ရက်နေ့အား ဆိုင်းကလုန်းအကူအညီအတွက် ကမ္ဘာ့လှုပ်ရှားမှုနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်နှိုးဆော်ထားသည်။(ဒီမှာ ဖတ်ပါ။) ထိုနှိုးဆော်ချက်အရ နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာများအနေဖြင့် မေလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ရန်ပုံငွေပွဲများ ကျင်းပခြင်း၊ နိုင်ငံတကာအကူအညီများ ချက်ချင်းဝင်ရန်တောင်းဆိုသည့် ဆန္ဒပြပွဲများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဖယောင်းတိုင်ထွန်းဆုတောင်းပွဲများ ပြုလုပ်ခြင်းတို့ကို ကမ္ဘာတလွှားတွင် လုပ်ဆောင်ကြရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါသည်။ အင်မတန် လျော်ကန်သင့်မြတ်သော တိုက်တွန်းချက်ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးတွင် ရောက်ရှိနေသော မြန်မာများအနေဖြင့်လည်း မိမိတို့ ရောက်ရှိရာနိုင်ငံအလိုက် မိမိတို့ တတ်နိုင်သော လှုပ်ရှားမှုများအား လုပ်ဆောင်သွားကြရန် ထပ်ဆင့်တိုက်တွန်းလိုက်ရပေသည်။
Posted by ကိုပေါ on Wednesday, May 14, 2008
Labels: political activity Comments: (2)
ကျောကို အကြိမ်ကြိမ် အချကြမ်းလွန်းလို့
ဓားပြမှန်း သိခဲ့တာ ကြာပြီ။
ဒီတခါ လုပ်ရပ်ဟာ လူမဆန်ဆုံးဘဲရယ်လို့
“ဟင်း ဟင်း ဟင်း ဟင်း…
ဒီမယ်……ကျုပ်နာမည် ဘုရားဒကာ ဦးအောင်ဒင်လား…
Posted by ကိုပေါ on Thursday, May 8, 2008
“တပ်မတော်သာ အမိ၊ တပ်မတော်သာ အဖ”….. တဲ့။
“တိုင်းပြည်ကို ချောက်ထဲမကျအောင် ကယ်တင်လိုက်ရတာပါ”……တဲ့။
“တိုင်းပြည်ပြိုကွဲမယ့် အန္တရာယ်ကနေ ကာကွယ်လိုက်ရတာပါ”…..တဲ့။
ထွီ…..မတန်မရာ။ အခုလို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြုံလို့ ပြည်သူတွေ တကယ်လည်း ဒုက္ခရောက်ရော……ဘယ်မလဲ… အဲဒီ အမိအဖ လို့ ကိုယ့်ဘာသာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေ၊ ကယ်တင်ရှင်ကြီးတွေ၊ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူကြီးတွေ။ အားလုံးကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက် ပျောက်ကုန်ကြတယ်။
ကမ္ဘာတလွှားက တခြားနိုင်ငံတွေမှာ အခုလို အဖြစ်မျိုးကြုံရင်... စစ်တပ်က စွမ်းစွမ်းတမံ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေ၊ ပြန်လည် ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက် ပေးတယ်။ အကူအညီတွေပေးတယ်။
အခုတော့ လမ်းမပေါ်မှာ လဲကျနေတဲ့ သစ်ပင်တွေကို ပြည်သူတွေနဲ့ ရဟန်းသံဃာတွေဘဲ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းနေကြရတယ်။ သူတို့က ရုပ်မြင်သံကြားမှာ တကွက်နှစ် ကွက် ဟန်ပြလုပ်ပြီး ၀ါဒဖြန့်ဘို့ဘဲ ကြိုးစားနေတယ်။
အခု နောက်ဆုံးကြားရတဲ့ သတင်းအရဆိုရင် တော်တော် အော့နှလုံးနာပြီး မသတီစရာ ကောင်းတယ်။ လူတွေ အုံကြွမှာစိုးရိမ်လို့ ရန်ကုန်မှာ လုံခြုံရေးတွေ တင်းကြပ်ထားသတဲ့။ တော်တော်လည်း တရားကျဘို့ ကောင်းတယ်။
မုန်တိုင်းတို့ မြေငလျှင်တို့ ရေကြီးတာတို့ဟာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေမို့ တားဆီးလို့မရတာ မှန်ပေမယ့် လူအသေအပျောက်နည်းအောင်၊ အိုးအိမ်အပျက်အစီးနည်းအောင် ကြိုတင် အစီအမံတွေ ချထားနိုင်တယ်။ ပြီးတော့ မုန်တိုင်းပြီးပြီးချင်းမှာလည်း ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေကို အလျှင်အမြန်လုပ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်တယ်။
ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံမို့ အစိုးရက ကြိုတင်တပ်လှန့်မှုတွေ ထိထိရောက်ရောက်မလုပ်နိုင်ပါဘူးလို့ လာဆင်ခြေမပေးနဲ့။ အမျိုးသားညီလာခံထောက်ခံဆန္ဒပြပွဲတွေတုန်းကတော့ မြို့တိုင်းရွာတိုင်း တအိမ်တယောက်နှုန်းနဲ့ မထွက်မနေရ ထွက်လာအောင် ဖိအားပေးတတ်တယ်။ အတင်းအဓမ္မ လုပ်အားပေးခိုင်းပြန်ရင်လည်း လူထုမှာ ပုန်းလို့တောင် မလွတ်စတမ်း အကွက်စေ့စေ့ ခိုင်းတတ်တယ်။
ဟော….လူတွေ အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်ဘို့ကျတော့ တကယ်ဘဲ မျက်နှာလွှဲခဲပစ် နေနိုင်ရက်တယ်။ နေနိုင်မှာပေါ့။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကလေးတွေ၊ ၀န်ကြီးတွေ၊ ၀န်ကလေးတွေရဲ့ သားသမီးတွေက စင်္ကာပူလိုနိုင်ငံမျိုးမှာ ပြည်သူ့ချွေးနှဲစာကို ဓားပြတိုက်လို့ ရထားတဲ့ ပိုက်ဆံတွေနဲ့ ကွန်ဒိုမီနီယံတွေဝယ်၊ ကားတွေဝယ်စီး။ ကြွားကြ၀ါကြ ပလွှားကြ။ မုန်တိုင်းက သူတို့တတွေနဲ့ အဝေးကြီးမို့လား။ သူတို့ဘ၀တွေ ပြည်တော်သာနေရင် ပြီးရော ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ တိုင်းပြည်ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဂရုလုံးလုံးမစိုက်တဲ့ အစိုးရ။ အဲသည်အစိုးရမျိုးရှိနေတာဟာ ပြည်သူအတွက် အထောက်အကူမရဘဲ ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးကြီးသက်သက်ဘဲ။
စင်္ကာပူမှာရောက်နေတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်သားသမီး၊ ၀န်ကြီးသားသမီး ဆိုတဲ့သူတွေ….။ သင်တို့ သိအောင်ပြောလိုက်မယ်။ သင်တို့ ဖခင်တွေဟာ ဒီရာထူးကို လူထုက ရွေးချယ်တင်မြှောက်လို့ရထားကြတာမဟုတ်ဘူး။ လူထုဆီက အာဏာကို ဓားပြတိုက်ယူထားလို့သာ ဒီနေရာ ဒီရာထူးတွေကို ရခြင်းဖြစ်တယ်။ သင်တို့သုံးဖြုန်းနေတာ တွေဟာလည်း လူထုစားမယ့် ထမင်းလုပ်ကို ပုတ်ချပြီးမှ ရလာတဲ့ ပြည်သူရဲ့ချွေးနှဲစာ ပိုက်ဆံတွေဖြစ်တယ်။ပြည်သူတွေရဲ့ သွေး၊မျက်ရည်နဲ့ ရင်းပြီးမှ စားရတဲ့ ထမင်းကို သင်တို့ မြိန်ယှက်ပါသလား။ သင်တို့မှာ ကိုယ်ချင်းစာတရား မရှိတော့ဘူးလား။ သင်တို့ လူစိတ်ခေါင်းပါးသလား။ သင်တို့ဟာ သွေးစုတ်ဖုတ်ကောင်တွေလား။
ပြည်သူအားလုံးအနေနဲ့ကတော့ ဒီ သွေးစုတ်ဖုတ်ကောင်၊ မကောင်းဆိုးဝါး စစ်အစိုးရကို မြန်မာ့မြေပေါ်က အမြန်ဆုံး အမြစ်ပါပြတ်အောင် မဖြစ်မနေ ဆန့်ကျင်တော်လှန်ကြရမှာဘဲ။
Posted by ကိုပေါ on Wednesday, May 7, 2008
“နာဂစ်မုန်တိုင်းဘေး ဒုက္ခသည်များကို ၀ိုင်းဝန်းကူညီကြစို့”
မြန်မာပြည်အတွင်း နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဒဏ်ခံရသူများ ကယ်တင်ထောက်ပံ့ရေး အတွက် စင်္ကာပူနိုင်ငံ ပင်နင်ဆူးလားပလာဇာ ငါးထပ်ရှိ လမ်းပြကြယ်မြန်မာစာကြည့် တိုက်တွင် အလှူငွေများ စတင် လက်ခံနေပါပြီ။
နေ့စဉ် ညနေ ၆ နာရီ ခွဲ မှ ည ၉ နာရီ အထိ စာကြည့်တိုက်ကို ဖွင့်လှစ်လက်ခံသွား မည်ဖြစ်သည်။
အလှူငွေအပြင် အ၀တ်အထည် များကို လှူဒါန်းပါကလည်း လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
အလားတူ ပင်နီဆူးလားရှိ မြန်မာဆိုင်များတွင်လည်း အလှူခံဌာနများ ဖွင့်လှစ်ထားရှိပါ သည်။
***ငါးထပ်တွင် သပြေနုဆိုင်နှင့် လမ်းပြကြယ် စာကြည့်တိုက်။
Posted by ကိုပေါ on Tuesday, May 6, 2008
Labels: donation drive Comments: (1)
ဆေးတံတို ကဗျာထဲမှာတော့ ကဗျာစာဆိုဟာ ပေးလာတဲ့ ဆေးတံကို ယူရမလား မယူရမလား ဝေခွဲမရဖြစ်နေပုံရပါတယ်။ စာဆိုက မိန်းမသား ဖြစ်ဟန်တူတယ်။ မိန်းမသားဆိုတော့လည်း ပေးတိုင်းယူလို့မဖြစ်ဘူးလေ။ တော်တော်ကြာ သူ့ကို ကြိုက်လို့ လက်ခံလိုက်တယ် ထင်သွားပြန်ရင် အခက်သား မဟုတ်လား။
အင်မတန်ဆင်းရဲလှတဲ့ ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်အတွင်း နာဂစ်ဆိုတဲ့ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီး ဖြတ်သန်းတိုက်ခိုက်သွားတဲ့အခါမှာလည်း... ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးက ကြည့်မနေပါဘူး။ ချက်ချင်းဆိုသလို အကူအညီပေးဘို့ ကမ်းလှမ်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်နေတဲ့ (ခုနင်က ရှေးစာဆိုထက်တောင် အရှက်အကြောက်ကြီးပုံရတဲ့) စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေက အဲဒီ ကမ်းလှမ်းချက်ကို မဆိုင်းမတွဘဲ ပုတ်ချ ပစ်လိုက်ပါတယ်။ သူတို့အတွက် ဘာမှ တွေဝေနေစရာ၊ ဝေခွဲမရ ဖြစ်နေစရာအကြောင်းမရှိဘူးမို့လား။
့ပြည်သူတွေ ငတ်တာပြတ်တာ၊ ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တာဟာ….ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ ငတ်ပြတ်တာ၊ ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တာမှ မဟုတ်တာဘဲကလား။ ဘယ်သူသေသေ၊ ငတေနဲ့ ငရွှေ တို့ မာရင် ပြီးရော မဟုတ်လား။ အဓိကက ပြည်တွင်းက အဖြစ်မှန်တွေ၊ အခြေအနေမှန်တွေကို အကူအညီပေးရင်းရောက်လာမယ့် ပြည်ပက လူတွေ၊ ပြည်ပက အဖွဲ့အစည်းတွေ သိမသွားဘို့၊ မြင်မသွားဘို့ ပိုမိုအရေးကြီးတာ မဟုတ်လား။
နောက်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေအနေနဲ့….“ငါတို့ရဲ့ အခါတော်ပေး ဘိုးတော်က တယ်စွမ်းပါ လား” ဆိုပြီး သူတို့ ဗေဒင်ဆရာရဲ့ကျေးဇူးဂုဏ်ကို အခုလောက်ဆို တသသနဲ့ အောက်မေ့ဆင်ခြင် မဆုံးဖြစ်နေ လောက်ပြီ။ “သူ့အကြံပေးချက်အတိုင်း မြို့တော်ကို ကြပ်ပြေးကို အမြန်ရွှေ့မိပေလို့သာပေါ့။ နို့မဟုတ်ရင် ငါတို့ပါ မုန်တိုင်းဒဏ်ခံနေရဦးမှာ။ ဘိုးတော်ကျေးဇူး အထူးကြီးမားပေစွ”…ပေါ့လေ။
ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကတော့…..ဟောဒီ ကိုတင်လှိုင်ရဲ့ အနှစ်နှစ်ဆယ် တေးလေးကို ဆိုညည်းရုံကလွဲလို့ ဘာများတတ်နိုင်ကြဦးမှာလဲ။
Posted by ကိုပေါ on Monday, May 5, 2008
“နေ၀င်း၊ မျိုးမျိုး၊ ဖိုးခင်”
နေ၀င်း ကို ရွာထဲက အများစုက “မနေ” ဟု ခေါ်ကြသည်။ ကျနော့်ထက် ၈ နှစ်ခန့်ကြီးသည်။ လူပုံက ဖြူဖြူနွဲ့နွဲ့၊ လမ်းလျှောက်လျှင်လည်း ကနွဲ့ကလျ။ ရယ်ပြန်လျှင်လည်း ခိုးခိုးခစ်ခစ်။ နေ၀င်းသည် လွတ်လပ်သော လူ့အဖွဲ့အစည်းရှိသည့်၊ “ဂေး”များကို ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမရှိသည့် နိုင်ငံများတွင်သာ လူဖြစ်ခွင့်ရခဲ့ပါက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဂေး ဘ၀ကို ခံယူကောင်း ခံယူပေမည်။ ယခုလို မပွင့်လင်းသော မြန်မာလူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်၊ အထူးသဖြင့် ရိုးရာအစွဲကြီးလွန်းသော ကျေးတောရွာငယ်ကလေး တခုတွင် လူလာဖြစ်သည့်အတွက် နေ၀င်းသည် ပေါ်တင်မဂေးရဲရှာ။ တိတ်တိတ်ပုန်းသာ ဂေး ရရှာသည်။
လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း၂၀ ကျော် ကျနော် ရွာမှ ထွက်ခွာခဲ့သောအချိန်က နေ၀င်းသည် မူလတန်းပြ ဆရာ အဖြစ်နှင့် ကျန်ရစ်ခဲ့ပေသည်။ ရှပ်အင်္ကျီအဖြူ၊ ပုဆိုးအစိမ်း ၀တ်လျက် ကျနော့်အိမ်ရှေ့မှ ဖြတ်၍ စက်ဘီးနင်းကာ ကျောင်းတက်သော ကျောင်းဆရာ နေ၀င်း၏ ပုံရိပ်သည် မနေ့တနေ့ကလိုပင် ကျနော့် မျက်စိတွင် မြင်ယောင်လျက်ရှိသေးသည်။
မျိုးမျိုးကတော့ ကျနော့်ညီ ၀မ်းကွဲ။ ကျနော်နှင့် အသက်မတိမ်းမယိမ်း။ ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုလျှင် ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်က ဓါတ်မတည့်။ ၀ိုင်းထဲတွင် ချပေးလိုက်သည့် ကြက်နှစ်ကောင်လို မြင်တာနှင့် ပြေးခွပ်ချင်နေသည်။ မူလတန်း ကျောင်းသားဘ၀က မျိုးမျိုးနှင့် ကျနော် မသတ်ပုတ်သည့်နေ့မရှိ။ ကျနော့်လက်ချက်ကြောင့် ဒီကောင် ဖူးယောင်ပြီး ပြန်သွားရသလို၊ သူ့လက်ချက်ကြောင့် ကျနော့်မျက်နှာတွင် သွေးစို့နေသော အစင်းရာ ဗရပွနှင့် အိမ်ပြန်ခဲ့ရပေါင်းလည်း များပေပြီ။ မျိုးမျိုးအမေက ကျနော့်မိခင်အား “ မစောရှင်၊ တော့်သားလေး မျိုးမျိုးကို လုပ်လိုက်တာ ဟိုမှာ မျက်နှာတခု လုံးလည်း မြင်မကောင်းဘူး” လို့ တိုင်တောတော့... အမေက “အမလေး အတင်ရယ်၊ ညည်းသားလုပ်ထားတာလည်း ငါ့သား မျက်နှာမှာ ရစရာ မရှိပါဘူးအေ” လို့ ပြန်ဖြေသတဲ့။ အဲဒီကျမှ မျိုးမျိုးအမေက ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရယ်မောပြီး “ ကျုပ်ကလည်း မျိုးမျိုးကို မေးကြည့်ပါတယ်။ ငါ့သားနှယ်...ဟိုက နင့်ကို ဒီလောက်ထုရိုက်နေတာ၊ နင်က ဘာမှ ပြန်မလုပ်ဘဲ ငြိမ်ခံခဲ့ရသလား လို့ ဆိုတော့ မျိုးမျိုးက.."ဟာ၊ အမေကလဲ၊ ကျနော်လည်း ဘယ်ခံပါ့မလဲ။ ကျနော် ပြန်ကုတ်လိုက်တာ ဟိုကောင့်မျက်နှာမှာလည်း အစင်းတွေချည်း ပါဘဲ..လို့ ပြောတယ်” တဲ့။
မှတ်မှတ်ရရ အမေတို့ ဆွေမျိုးတစု စုပေါင်းပြီး သားတွေကို ရှင်ပြုတုန်းကတောင် မျိုးမျိုးနဲ့ ကျနော် တချီတမောင်း ကျောင်းပေါ်မှာ ကိုရင်ဘ၀ နဲ့ သတ်ပွဲကြီး ဆင်နွှဲလိုက်ရသေးတယ်။
မျိုးမျုိးတို့အိမ်က တနေ့ ကျောင်းမှာ ဆရာတော်တွေနဲ့ ကိုရင်တွေအားလုံးကို နေ့ဆွမ်းကပ် တယ်။ ကိုရင်ဝိုင်းမှာ အတူထိုင်ပြီး ဆွမ်းစားနေရင်းက ဘယ်လိုကနေ ဘယ်လို ငြိတယ်မသိဘူး၊ ဆွမ်းစားရင်း တန်းလန်း ထသတ်ကြတာ ဟင်းခွက်တွေလည်း မှောက်၊ သင်္ကန်းတွေလည်း ပေကျံကုန်တယ်။ ဘုန်းကြီးဝိုင်းမှာ ဆွမ်းဘုန်းပေးနေတဲ့ ဦးဇင်းလေးက မနေသာဘဲ ထလာပြီး နှစ်ယောက်လုံးကို ဆွဲပြီး နဘန်ကျင်းပေးလိုက်တော့မှ ပွဲပြီးသွားတယ်။ ဟိုကောင်လည်း အဲဒီညနေဘဲ ကိုရင်လူထွက်သွားတာ။
အဲ...ကျနော် လူထွက်ရပုံကတော့ ငိုချင်းလေးချပြီး ထွက်လိုက်ရတာ။ ဖြစ်ပုံက ဒီလို.. ကျနော်ငယ်ငယ်က ကျနော့်အစ်မတွေက ကျနော့်ကို ရွယ်တူမိန်းကလေးတွေနဲ့ စရင်နောက် ရင် အင်မတန် ရှက်တတ်တာ (အခုနဲ့ တခြားစီ)။ အဲသည်တုန်းက သူတို့ နောက်နေတာက ကျနော်နဲ့ တတန်းထဲ ရွာတောင်ပိုင်းက သန်းလှ။ သူ့အဖေက မြန်မာဆေးဆရာကြီး ဦးသြဘ တဲ့။ အဲဒီ သန်းလှနဲ့ စနောက်ရင် ကျနော်အရမ်းရှက်တယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ ကျနော့် ကိုရင်ဘွဲ့က ရှင်သြဘာသ တဲ့။ အဲဒီ တနေ့ ကိုရင်ဘ၀နဲ့ ရွာထဲလှည့်ဆွမ်းခံတုန်း အိမ်ကိုရောက်တော့ အစ်မတွေက ဆွမ်းလောင်းရင်း ထုံးစံအတိုင်း နောက်ကြပြန်ပါရော။ “ဟယ်....ငါတို့ မောင်လေးက သန်းလှနဲ့ ရေစက်ပါပုံများ ကိုရင်ဘွဲ့အမည်ကတောင် သြဘသား တဲ့။” ကြည့်ဦး၊ သြဘာသ ပါဆိုမှ သြဘသား ဆိုပြီး ကြံဖန်နောက်တာ။ ကျနော်ကလည်း ရှက်တော်မူလို့ ကတုံးကြီးတန်မဲ့ ပုလဲတွေ ခ ပြီး သင်္ကန်းတွေ ဆွဲချွတ်၊ လူဝတ်လဲ၊ ကျောင်းပြန်မသွားတော့ဘူး လုပ်တာပေါ့။ နောက်တော့မှ အတင်းချော့မော့၊ သင်္ကန်းတွေ ပြန်ဝတ်ပေးပြီး ကျောင်းကို ပြန်ပို့ရတယ်။ အဲသည်ညနေ လူထွက်တော့တာပါဘဲ။
ငယ်ငယ်က တဇောင်းစေးနဲ့ မျက်ချေး ဆိုသလို မတည့်တဲ့ မျိုးမျိုးနဲ့ ကျနော်ဟာ အလယ်တန်း ကျောင်းသားဘ၀ တခြားရွာက ကျောင်းမှာ သွားတက်ရတော့ အင်မတန်ချစ်ကြသဗျ။ ညီအကိုချင်းကလည်း ဖြစ်ပြန်၊ နောက် သူ့အိမ်က သူ့ကို ကျနော့်အစ်မ ကျောင်းဆရာမ လက်ထဲမှာ အပ်ထားတော့ အိမ်မှာဘဲ စာအတူလာကြည့်၊ စာလုပ်ကြဆိုတော့ ပိုတွဲမိသွားရော။ ဒါပေမယ့် ဒီကောင်က ကျောင်းစာမှာ လုံးဝ စိတ်မ၀င်စားဘူး။ တချိန်လုံးစကားတွေ များနေတုန်းက ချောမွေ့လို့။ ဟော...ကျောင်းစာကို စဖတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ မျိုးမျိုး ဆီက “အဟမ်း..အဟမ်း” ဆိုတဲ့ ချောင်းဟန့်သံတွေက စာတကြောင်းကို အဟမ်း ငါးခါလောက်ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ၆ တန်းလောက်မှာဘဲ ဒီကောင် ကျောင်းကထွက်ပြီး လယ်လုပ်တယ်။ စပါးပွဲစားလုပ် တယ်။ မြင်းလှည်းမောင်းတယ်။
ကျနော် ဆယ်တန်းအောင်လို့ ရွာကို ပြန်လာပြီး မြေပဲခင်း ညဘက်သွားစောင့်တော့ မျိုးမျိုးလည်း ကျနော်နဲ့ အတူ လိုက်စောင့်ပေးတယ်။ ညဘက် ကောင်းကင်က ကြယ်တွေကို မော့ကြည့်ပြီး အာကာသထဲက အလင်းကိုတောင် စွဲစုပ်နိုင်တဲ့ တွင်းနက်ကြီးတွေအကြောင်း၊ ဂြိုလ်တွေ အနားက ဖြတ်ပြန်သန်းပြီး ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်ပို့တဲ့ အာကာသယာဉ်တွေအကြောင်း၊ တခုနဲ့တခု ဝေးရာဆီကို ပြန့်ကြဲခွဲထွက်သွားတဲ့ ဂယ်လက်ဆီတွေ အကြောင်း ကျနော်ဖတ်ဘူးသမျှ ပြန်ပြောပြတော့ မျိုးမျုိးတယောက် ပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့ စိတ်ဝင်တစား နားထောင်နေခဲ့တာကို သတိရမိတယ်။ မလှမ်းမကမ်းမှာ လှမ်းမြင်ရတဲ့ မုန်းချောင်းရေကတော့ လရောင်အောက်မှာ ငွေရောင်တလက်လက်နဲ့ ငြိမ့်ငြိမ့်လေး စီးဆင်းလို့ပေါ့။
အဲဒီနောက်ပိုင်း တက္ကသိုလ် တက်ကတည်းက မျိုးမျိုးနဲ့ ပြန်မဆုံဖြစ်တော့ဘူး။
ကျနော် မူလတန်းကျောင်းသားအရွယ်မှာ ရွာထဲက အတူကစားဖော်ကစားဘက် သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရှိတယ်။ ၀င်းဇော်နဲ့ ဖိုးခင်တဲ့။ ဖိုးခင်က မွေးကတည်းက မျက်လုံးတဖက်မှေးနေတယ်။ တချို့ကလည်း သူ့ကို မျက်မှေးဖိုးခင်တဲ့။ ကျနော်တို့ ဆိုတာ လူကသာ မူလတန်း တက်တဲ့အရွယ်ဘဲ ရှိသေးတာ။ လူကြီးတွေရဲ့ လေကို လိုက်ပြီး နှမ ရှိတဲ့လူဆိုရင် ယောက်ဖ လို့ ခေါ်ပြီး နောက်ချင်သေးတာ။ ကျနော့်မှာ နှမငယ် အရင်း မရှိလို့သာတော်တော့ တယ်။ အဲ..တရက်မှာ ၀င်းဇော်ရဲ့ ညီမ ရီရီခိုင်က အလှူခံ အသံချဲ့စက်က တခါတရံ ကြားရတတ်တဲ့ မာမာအေးသီချင်းကို သူ့ဟာသူ ကြားချင်သလို ကြားပြီး တလွဲဆိုတယ်။
“သ၀န်ကြောင်တာမဟုတ်ဘူးရှင်.... ကျမလင် ကိုဖိုးခင်” တဲ့။
အဲဒီမှာ ကျနော် နဲ့ ဖိုးခင် က ခွက်ထိုးခွက်လှန် ရယ်တာပေါ့။ ၀င်းဇော်ကတော့ မျက်နှာကြီး နီရဲပြီး သူညီမကို လှမ်းဟောက်တယ်။ “ဟာ။ ဒီကောင်မလေး၊ ဘာတွေ လျှောက်ဆိုမှန်းမသိဘူး၊ သွားသွား၊ အနားမလာနဲ့” တဲ့။ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်က ၀င်းဇော်ဖြစ်ပုံကို ကြည့်ပြီး ပိုရယ်ကြရတယ်။
ဖိုးခင်ကတော့ လေးတန်းတောင် မရောက်လိုက်ပါဘူး။ ကျောင်းထွက်တယ်။ ပျိုးနှုတ်တယ်၊ ကောက်ရိတ်တယ်။ မိဘရဲ့ လယ်အလုပ်တွေမှာ ကူလုပ်တယ်။
ကျနော်အလယ်တန်းကျောင်းသားဘ၀ ညနေဘက် ရွာထိပ်ကို အပျင်းပြေထွက်ရင် နွားစာအတွက် မြက်ထုံးကြီး နှစ်ထုံးကို တံပိုးနဲ့ လျှိထမ်းပြီး ပြန်လာတဲ့ ဖိုးခင်ကို တွေ့ရတတ်တယ်။ ဟော...ကျနော် တက္ကသိုလ်စတက်တော့ ဖိုးခင်ဆိုတာ အိမ်ထောင်ကျလို့ ကလေးတောင် သုံးယောက်လောက်ရနေပြီ။
ဟိုတနေ့ကဘဲ ကျနော့်တူကလေးတယောက် ဗမာပြည်က ပြန်လာတော့ ကျနော့်အစ်မတွေဆီက စာပါလာတယ်။ စာထဲမှာ ရေးထားတာတခုက နေ၀င်း၊ မျိုးမျိုး၊ ဖိုးခင် အားလုံး ဆုံးသွားကြတာ ကြာပြီတဲ့။ သေပုံသေနည်းကလည်း အတူတူဘဲ။ သုံးယောက်စလုံး အေအိုင်ဒီအက်စ် ရောဂါနဲ့ဘဲ ဆုံးသွားကြတာ။ အဲဒီရောဂါနဲ့ဘဲ နောက်ထပ် သေလုဆဲဆဲ လူတချို့ရဲ့ နာမည်တွေလည်း ပါတယ်။ အခု သူတို့နဲ့ တလမ်းထဲကပင် လူသိသူသိ အေအိုင်ဒီအက်စ်နဲ့ သေသွားသူ ငါးဦးထက် မနည်းရှိပြီ ဖြစ်ကြောင်းလည်း ပါသည်။
သြော်....ကျနော်တို့ ရွာဖက်မှာ လူအများစုက ငှက်ဖျားဆိုတာ မြစ်ဖျားချောင်းဖျားက ရေစိမ်းတွေကို သောက်ရင်ဖြစ်တတ်တာလို့ ယုံကြည်နေကြတုန်း။ အလယ်တန်းတုန်းက ကျောင်းစာထဲမှာ အနောဖလိစ်လို့ ခေါ်တဲ့ ခြင်တမျိုးက ငှက်ဖျားရောဂါပိုးကို သယ်ဆောင်ပုံအကြောင်း ကျနော်တို့ အကျယ်ကြီး အော်ပြီး စာကျက်ခဲ့လည်း အမေတို့ ကိုယ်တိုင်က ရေစိမ်းသောက်လို့ ဖြစ်တာလို့ ထင်နေကြတုန်း။
သည်လို ဒေသမှာ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီ ပိုးနဲ့ ပတ်သက်လို့ အသိပညာပေးလည်း ယနေ့ထက်ထိ ထိထိရောက်ရောက်မရှိ။ ကွန်ဒုံးအစွပ်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ ပညာပေးမရှိတဲ့အပြင် ကွန်ဒုံးကိုတောင် အပြင်မှာ မြင်ဘူးကြဟန်မရှိ။ မြင်ဘူးလည်း တနေ့လုပ် တနေ့စားတွေအနေနဲ့ ၀ယ်သုံးနိုင်ကြမည့်ပုံမပေါ်။
ကျနော်သည်.....အစ်မ၏ စာကို ဖတ်ပြီး သက်ပြင်းရှည်ကြီး တချက်ကို မှုတ်ထုတ်မိသည်။ သူတို့အားလုံး အခုလို အရွယ်ကောင်းမှာ သေဆုံးသွားကြရတာ သူတို့ဘက်က ချွတ်ယွင်းချက်တွေ ပေါ့ဆမှုတွေ ရှိကောင်းရှိမှာ ဖြစ်ပေမယ့်လည်း ကျန်းမာရေးအသိမရှိလို့၊ လုံလောက်သော ကာကွယ်ရေးအစီအမံများ မရှိလို့ စောစီးစွာ လူ့လောကကို စွန့်ခွာသွားရတာ ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ကျနော်မတွေးဘဲ မနေနိုင်ပါ။
ကျန်းမာရေး ပြဿနာလိုပင်၊ မြန်မာပြည်၏ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အဘက်ဘက်မှာလည်း ပြဿနာပေါင်းစုံ ပြည့်နှက်လျက်။ သည်ပြဿနာတွေကို စတင်ထိထိရောက်ရောက် ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းခွင့်သာသော အခြေအနေတရပ် ပေါ်ပေါက် လာအောင် ကျနော်တို့ အားလုံး ၀ိုင်းဝန်း၍ မလျှော့သောလုံလဖြင့် အစဉ်တစိုက် လုပ်ဆောင် သွားကြရမည်သာဖြစ်သည်။
Posted by ကိုပေါ on Saturday, May 3, 2008
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အကောင်းစားလေး လီယိုနာဒိုဒါကိုပေါ ဟာ ငယ်ငယ်ကတည်းက အင်မတန် နမော်နမဲ့ နိုင်သော လူသားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ “ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အကောင်းစားလေး” ဆိုသော ဝေါဟာရကို မျက်စိ စပါးမွှေးစူးနေသူများရှိရင် အဲဒီ စကားလုံးဟာ ကျနော် ငယ်ငယ်က အင်မတန် နှစ်သက်တဲ့ ကာတွန်းမောင်လွင်ရဲ့ ငထက်ဖြား ကာတွန်းထဲမှာ သုံးလေ့ရှိတဲ့ အသုံးအနှုန်းတခုမျှသာ ဖြစ်ကြောင်း ဒီနေရာမှာ ရှင်းလင်းပြောကြား လိုက်ပါရစေ။
နမော်နမဲ့ နိုင်တဲ့အကြောင်းပြောပြရရင်...... ရုံးမှာ ကော်ဖီဖျော်သောက်ရင် ကော်ဖီမှုန့်၊ ကော်ဖီမိတ်၊ သကြား စတာတွေကို ခွက်ထဲထည့်ပြီးသကာလ နောက်ဆုံးရေနွေးထည့်တဲ့အဆင့်မှာကျမှ ရေနွေးအစား ရေအေး (Cold water tap)ကို မှားယွင်း နှိပ်မိလို့ ကော်ဖီပျက်ရတဲ့ အကြိမ်ပေါင်းလည်း မနည်းလှတော့ပါဘူးကွယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါကအသေးအဖွဲလို့ ပြောလို့ရတယ်။ သိပ် ကသိကအောက်မနိုင်လှသေးပါဘူး။
တနေ့က ရုံးမှာ တနေရာကို ထသွားပြီး စားပွဲကို ပြန်ရောက်လာတော့ ပလပ်စတစ်အိပ်ကလေးထဲမှာ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ထည့်ထားတဲ့ အမှတ်တရ ကဒ်လှလှကလေး တခု တင်ထားတာတွေ့ရတယ်။ ရှေ့အဖုံးမှာ... ခွေးဘီလူးမျက်နှာ အရုပ်ကလေးနဲ့။ အောက်မှာ စာတကြောင်းလဲပါတယ်။ အဖုံးပေါ်က စာကို ဖြန်းသန်း ဖတ်လိုက်ပြီးတော့ အတွင်းကို ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သုံးယောက်လောက် အမှတ်တရ စာရေးပြီး လက်မှတ်ထိုးထားတာကို တွေ့ရတယ်။ သူတို့ ရေးထားတာကိုလည်း အဖြစ်လောက်ဘဲ မျက်စိဝေ့ကြည့်လိုက်တယ်။ သိပ်စိတ်မ၀င်စားလှဘူး။
ရုံးမှာက ဒီလိုဘဲလေ။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ ကလေးမွေးတဲ့အခါမျိုး၊ အလုပ်ထွက်တဲ့ အခါမျိုးတွေမှာ အခုလို အမှတ်တရကဒ်ကလေးဝယ်။ အမှတ်တရစကား စုရေး၊ လက်မှတ်ထိုးပြီး ပေးကြတာ ထုံးစံဘဲ မဟုတ်လား။ ဒီတခါကတော့ အလုပ်ထဲက “နိုမဲလ်”ဆိုတဲ့ ဖိလစ်ပီနို အင်ဂျင်နီယာတယောက် အလုပ်ထွက်တော့မယ့်အချိန်။ နိုမဲလ် အတွက် အမှတ်တရ ရေးကြမယ်ပေါ့။
အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ တဌာနတည်း တွဲလုပ်လာတာကလည်း ကြာပြီ။ အိမ်ချင်းကလည်း နီးတော့ ပြောမနာ၊ ဆိုမနာ တော်တော်ရင်းနှီးသပေါ့ဗျာ။ အဲဒါနဲ့ ကဒ်ပေါ်မှာ ရေးမလို့ ဘော့ပင်ရှာတော့ အနီရောင်ဘော့ပင်ကလွဲလို့ တခြားဘော့ပင်က ရုတ်တရက်ရှာမတွေ့။ အပျင်းဓါတ်ခံလေး ကလည်း ရှိတာမို့ ကြိုးစားပမ်းစား လိုက်ရှာမနေတော့ဘဲ နောက်ဆုံးတော့ အနီရောင်နဲ့ဘဲ နှိပ်ထည့်လိုက်သပေါ့ဗျာ။ ပြီးတော့....ဟောသလိုလည်း ရေးလိုက်သေးတယ်။
“...........အခုလို ခွဲခွာဘို့ အချိန်ရောက်လာတော့လည်း ၀မ်းနည်းစရာပေါ့ကွာ။ ဒါပေမယ့် မင်းလို လူတယောက်ကို ငါ့စိတ်ထဲမှာ အမြဲသတိရနေမှာပါ။ မင်းအတွက် လာဘ်ကောင်းမယ့် မင်အရောင်လေး ရွေးချယ်ပြီး အမှတ်တရ ရေးလိုက်ပါတယ်ကွာ”။
ကြည့်ဦး။ ကြည့်ဦး။ ...လုပ်ပုံက။ ကိုယ့်ဘာသာ ရှိတဲ့မင်နဲ့ ရေးလိုက်တဲ့ဟာကို ပလီစိချောက်ချက် လျှောက်ရေးပုံများ။
အဲ..ပြီးတာနဲ့ နောက်တယောက်ဆီကို လက်ဆင့်ကမ်းလိုက်တယ်။ ငါ့လက်ကလွတ်.....ဗြွတ်။
အဲဒီ နောက်တယောက်က ကျနော်ရေးတာဖတ်ပြီး မျက်လုံးပြူးသွားတယ်။ ပါးစပ်ကလည်း...
“ဟေ့လူ၊ ဒီကဒ်က နိုမဲလ်အတွက်မဟုတ်ဘူး။ ဘော့စ်ရဲ့ အနှစ်ငါးဆယ်ပြည့်မွေးနေ့အတွက် အမှတ်တရ ပေးမယ့်ကဒ်။ သူများရေးထားတာတွေလည်း သေသေချာချာ ဖတ်ကြည့်ဦး” တဲ့။ ဂိန်....။
ဟုတ်ပါ့ဗျား။ သေသေချာချာ ပြန်ကြည့်တော့မှ ဘော့စ်အတွက် မွေးနေ့ကဒ်ကြီး ဖြစ်နေတယ်။ သွားပြီ....အကျိုးတော့နည်းကုန်ပြီ။
ကဒ်ဝယ်လာတဲ့ အမျိုးသမီးက ကျနော့်ကို ပူညံပူညံလုပ်တော့တာပေါ့။ ဘာကြောင့် ဒီလောက်တောင် နမော်နမဲ့ နိုင်ရသလဲပေါ့လေ။ ၁၅ ဒေါ်လာတောင်ပေးရတဲ့ ကဒ်ဆိုဘဲ။ နောက်ပြီး အဲဒီ ဒီဇိုင်းက တခုတည်း ကျန်တော့တာတဲ့။ အဲဒါနဲ့ ကျနော်လည်း စင်္ကာပူအစိုးရရဲ့ လက်သုံးစကားကို ယူပြီး တောင်းပန်ရပေသပေါ့။ “ ရိုးရိုးသားသားမှားတာပါခင်ညာ (honest mistake)” ပေါ့လေ။
ဘုရား...ဘုရား...ကံသီပေလို့။ ကျနော်ရေးထားတာကို ဟိုပုဂ္ဂိုလ် မြင်ခဲ့လို့သာပေါ့နော်။ မဟုတ်ရင် ဘော့စ်က “ဒီကောင်၊ ငါ့မွေးနေ့မှာ သက်သက် နိမိတ်မရှိ၊ နမာမရှိ ငါ့ကို သေခိုင်းနေတာလားမသိဘူး” လို့ တွေးချင် တွေးနေဦးမှာ။ သူက ရှေးရိုးစွဲ တရုတ်လူမျိုး။ အယူကသီးတတ်ပါဘိသနဲ့။ အလုပ်ကနေ ခေါင်းနဲ့ ဆင်းရမယ့်ကိန်းဘဲ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်လောက်ကလည်း အဲသလိုဘဲ နမော်နမဲ့ နိုင်မှုကြောင့် အတော်ကြီးကို စိတ်ကသိကအောက် ဖြစ်လိုက်ရသေးတယ်။
အဲဒီတုန်းက မဒမ်ပေါက NUS မှာ ကျောင်းတက်နေဆဲ။ စာမေးပွဲဖြေကာနီးတညမှာ ညစာစားရင်း မဒမ်ပေါတယောက် လည်ချောင်း ငါးရိုးစူးပါလေရော။ အဲဒါနဲ့ ဆေးခန်းကိုပြေးတော့ ဆေးခန်းကလည်း မတတ်နိုင်။ ဆေးရုံကို ထပ်ဆင့် ညွှန်းတာကြောင့် NUH အရေးပေါ်ဌာနကို ညကြီးမင်းကြီးပြေးရတယ်။
ဖြစ်ချင်တော့ အဲဒီတုန်းက SARS လို့ခေါ်တဲ့ ကူးစက်ရောဂါတမျိုး အာရှမှာ စတင်ဖြစ်ပွားနေချိန်။ စင်္ကာပူဆေးရုံတွေမှာ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်တွေကို အဲသည်ညကမှ အပူတပြင်း စတင်ပြင်ဆင် ချမှတ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာ။
အရေးပေါ်ဌာနရောက်တော့ အထဲဝင်မယ့် လူတိုင်း အမည်တို့၊ အိုင်စီနံပါတ်၊ ဖုန်းနံပါတ် စတာတွေ ဖြည့်။ ပြီးတော့ ကိုယ်အပူချိန်တိုင်းဘို့ ဒစ်ဂျစ်တယ် သာမိုမီတာ တချောင်းစီ ထုတ်ပေးတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာလို နားထဲထိုးထည့်ပြီး တစက္ကန့်လောက်အတွင်း တွီကနဲ တိုင်းလို့ရတဲ့ အနီအောက်ရောင်ခြည် သာမိုမီတာကို အဲဒီညက မသုံးကြသေးဘူးခင်ဗျ။
အဲ...ကျနော့်လက်ထဲရောက်လာတဲ့ သာမိုမီတာပေါ်မှာ အသစ်စက်စက် ပလပ်စတစ်အိပ် အကြည်သားလေး စွပ်လို့ဗျ။ အဲဒါကို ကြည့်ရင်း ကျနော့်စိတ်ထဲမယ် “သြော်...စင်္ကာပူနိုင်ငံများ ချမ်းသာလိုက်တာ။ ဒစ်ဂျစ်တယ်သာမိုမီတာတောင် တခါသုံး အသစ်စက်စက် တယောက်တချောင်း ပေးနိုင်ပေတယ်...”လို့ ရွှေဥာဏ်တော် စူးရောက်ပြီး တွေးတယ်။ အဲဒါနဲ့ဘဲ အပေါ်က ပလပ်စတပ်အကြည်သားအိတ်ကလေးကို အသာချွတ်။ ဘေးက အမှိုက်ပုံးထဲကို ဖတ်ကနဲ ပစ်ထည့်။ ပြီးတော့ သာမိုမီတာကို ပါးစပ်ထဲမှာ ထည့်ငုံရင်း ခုံတန်းကုလားထိုင်မှာ မိန့်မိန့်ကြီး လက်ပိုက်ထိုင်ကာ စင်္ကာပူဆေးရုံရဲ့ ၀န်ဆောင်မှုကို အကျေနပ်ကြီး ကျေနပ်နေတယ်။
အဲဒီလို ငုံထားစဉ်အခိုက်မှာ မျက်စိက ဘာကိုသွားမြင်သလဲဆိုတော့ ဘေးဘီက တခြားလူတိုင်းဟာ ဘယ်သူမှ ကျနော့်လို ပလပ်စတစ်အိတ်အစွပ်ကို မချွတ်ဘူးခင်ဗျ။ နံဘေးမှာထိုင်နေတဲ့ မဒမ်ပေါ ကအစ လူတိုင်းအသီးသီး ပလပ်စတစ်အိတ်နဲ့တကွသော သာမိုမီတာ ကိုယ်စီငုံထားတာကို မြင်ရတော့တာကိုး။ အမယ်မင်း....ကိုယ်ကျုိးတော့ နည်းပါပေါ့လား။ သာမိုမီတာက ကျနော်ထင်သလို အသစ်စက်စက်မဟုတ်။ အပေါ်က ပလပ်စတစ်အိတ်အစွပ်ကသာ တခါသုံး။ အဲသည်အစွပ်ကိုသာ အသစ်လဲလှယ်တပ်ဆင်ပေးတာကိုးဗျ။ အဲဒီတော့ကျမှ ကိုယ့်အတွေးခေါင်ပုံ၊ နမော်နမဲ့ နိုင်ပုံကို ကိုယ့်ဘာသာ သတိထားမိတော့တယ်။ စိတ်ထဲမှာလည်း “ဟယ်.....အ လိုက် ထူ လိုက်တဲ့ ငါပါလား”ပေါ့လေ။
ပြီးတော့ လူတကာ ပါးစပ်ထဲ ထည့်ထားတဲ့၊ လူတကာ လက်နဲ့ ကိုင်ထားတဲ့ ဆေးရုံက သာမိုမီတာကြီးကို ပလပ်စတစ်အစွပ်မပါ၊ ဘာမပါ ငါ့ပါးစပ်ထဲ ငုံထားမိချေပေါ့...ဆိုပြီး ချက်ခြင်း ကိုယ်ပူတက်ချင်လာသလိုလို၊ ဖျားချင်လာသလိုလို၊ ခန္ဓာကိုယ်နေရာအနှံ့အပြားက ဟိုနားကယားသလိုလို၊ ဒီနားက ယံသလိုလို ဖြစ်လာတော့တာကိုး။ အဲသည်တုန်းက စိတ်ဒုက္ခရောက်လိုက်တာများ မပြောပါနဲ့တော့။ တလလောက်ကြာတဲ့အထိ စိုးရိမ် ပူပန်စိတ်တွေ နှိပ်စက်တာကို လိမ့်နေအောင် ခံလိုက်ရသပေါ့ဗျာ။
ကံကောင်းထောက်မလို့ အဲသည်တုန်းက ရောဂါကူးတာမခံလိုက်ရပါဘူး။ နို့မဟုတ်ရင် သတင်းစာမျက်နှာဖုံးမှာ ကိုယ့်ဓါတ်ပုံကြီးနဲ့ ခေါင်းကြီးသတင်းပါချင်ပါလာဦးမှာ။ “သာမိုမီတာကို တခါသုံးမှတ်ထင်၍ ပလပ်စတစ်အစွပ်ချွတ်ကာ ငုံမိသဖြင့် ရောဂါကူးစက်ခံရသော အူတူတူ လူနာ” ဆိုပြီးတော့လေ။ အောင်မယ်လေး.... နာမည်ပျက်လိုက်မယ့်ဖြစ်ခြင်း။
ဘလော့ဂ်ဖတ်လာ မိတ်သဟာ၊ ချမ်းသာကိုယ်စိတ် မြဲပါစေ။ နမော်နမဲ့နိုင်ခြင်း၊ ပျံ့လွင့်ခြင်း ကင်းရှင်းကြပါစေ.......။
Posted by ကိုပေါ on Thursday, May 1, 2008
Labels: Personal Comments: (8)
“ဖြူစင်သောအလှုငွေ၊ မွန်မြတ်သောစိတ်ထားနှင့် နာရေးကူည...
“မေလ ၁၇ ရက် သို့မဟုတ် ဆိုင်ကလုန်းအကူအညီအတွက် ကမ္ဘာလ...
“နာဂစ်မုန်တိုင်းဘေး ဒုက္ခသည်များကို ၀ိုင်းဝန်းကူညြီ...